गृह मन्त्रालयले साँझ ७ बजेपछि बिहान ७ बजेसम्म काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा रोक सबै जिल्लाका पास रद्ध, काठमाडौं छिर्न समेत रोक ! (विज्ञप्तीसहित हेर्नुस् विस्तृतमा) – Khabar PatrikaNp
गृह मन्त्रालयले साँझ ७ बजेपछि बिहान ७ बजेसम्म काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा रोक सबै जिल्लाका पास रद्ध, काठमाडौं छिर्न समेत रोक ! (विज्ञप्तीसहित हेर्नुस् विस्तृतमा)
July 30, 2020 162
काठमाडौं उपत्यकामा लकडाउन खोलेपछि भिडभाड निकै बढेको छ र उपत्यका छिर्नेहरु अनेक पावर पहुँच लगाईरहेका छन् । उपत्यकाभित्र मानिस लु्किछिपी समेत छिरिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले साँझ ७ बजेपछि बिहान ७ बजेसम्म काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा रोक लगाएको छ ।
निर्णय कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृहले ‘विशेष निर्देशन’ दिएको छ ।
हेर्नुस् गृहको विज्ञप्तीःः
सरकारले लकडाउन हटाएसँगै पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा भित्रनेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा थप ४५ जनामा कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले उपत्यकामा बिहीबार ४५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए । गौतमका अनुसार काठमाडौंका ४१ तथा भक्तपुर र ललितपुरका दुई÷दुई जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ ।
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ सय ७४ जनामा कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
६ हजार ३ सय ४ जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा २ सय ७४ जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले बिहीबार २ सय २७ जना संक्रमणमुक्त भएर डिस्चार्ज भएको बताए ।
्उनले हालसम्म १४ हजार २ सय ४८ जना स्वास्थ्य लाभ गरेर घर गएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या ५ हजार २ सय २७ छ ।
Prev४ सय अर्ब डलरको चीन र इरानबीच हालै एक शानदार आर्थिक सम्झौता भारतलाई धक्का
Nextकाठमाडौंका तीन नाकामा आठ हजार ४०१ जनाको कोरोना परीक्षण : २४ जनाको रिपोर्ट ‘पोजिटिभ’
प्युठानमा- बाँदरलाई हानेको गोली लागेर एकको मृत्यु